ရန်ပိုင်| January 4, 2013 | Hits:8,198
| | ရန်ကုန်မြိ့တွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် X2O သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၌ တရားခံဟု စွပ်စွဲကာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည့် ကိုဖြိုးဝေအောင် (၃၃) နှစ်သည် ယနေ့နံနက် ၃ နာရီခန့်က အသည်းကင်ဆာရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။
sa3January 4, 2013 - 2:26 pm Hep C is Hep C ,not back bone cancer .be fair news.naw ok yes?Kaung Yar Thu Ga Ti Lar Par Say Byar.Rest in peace brother.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 5, 2013 - 3:17 am to sa 3: Where did the reporter (ရန်ပိုင်) write ‘back bone cnacer’? I don’t find it.
Reply pps၁၂၃၄၅ January 4, 2013 - 7:47 pm တပ်မတော်၏ ကိုယ်တိုင် ဗုံးထောင်ဗုံးခွဲ ပြီး propagana လုပ်တဲ့ ထဲမှာ တရားခံ အနေနှင့် မတရား စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီး တိုင်းပြည်အတွက်ကော မိသားစု အတွက်ပါ အများကြီး နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ အခုထိ တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ မကောင်းမှုကြောင့် အနစ်နာခံနေရသူတွေ အများကြီးပါ။ ခင်ဗျားကို ဖမ်းချုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ လည်း ပြန်ခံရဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။
Reply true talker January 5, 2013 - 4:07 am The Intelligent has the Right to kill. This is so called Fake Democracy BURMA. During the Military Regime time and now,what is the difference ?
Reply ဒဲ့ဒိုး January 5, 2013 - 10:20 am မျောက်လောင်းလုပ်ကြံမှုမှာ လက်သည်ရှာမရတော့ တွေ့ကရာလူတွေ ဖမ်း၊ တပ်ချင်တဲ့ပုဒ်မတပ်။ ဒါရာဇ၀တ်မှုပဲဆိုပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ၊ သေဒဏ်တွေပေး။ မျောက်သားတော်ရဲ့ ရန်သူများကို ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးကြောင်းပါဘုရားလို့ သံတော်ဦးတင်လိုက်တော့ အားလုံးအေးစေပေါ့။
Reply မင်းကြီးညို January 5, 2013 - 1:43 pm ကိုဖြိုးဝေအောင် ကောင်းရာဘုံဌာနရောက်ပါစေ။ အသက်ငယ်ငယ်ဖြင့် ကွယ်လွန် အနိစ္စ